Shirka golaha wasiirada oo maanta looga hadlay arrimo aad xasaasi u ah (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa oo uu shir-guddoominayey ra’iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Xasan Cali Kheyre, waxaana shirka arrimaha looga hadlay ka mid ahaa amniga, hindise sharciyeedyada, waxqabadka wasaaradda gargaarka iyo arrimo kale.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa wasiirada amniga, difaaca iyo taliyeyaasha booliiska iyo nabad-sugida ka codsaday inay warbixin ka siiyaan golaha xaalada amniga. Howlgallada xasilinta amniga iyo howlgalka militariga ayaa si wanaagsan u socda dalka. Deegaanka Kuunyo-Barrow ee Jubbaland ayaa12-kii ilaa iyo 15-kii July lagu dilay ilaa 90 maleeshiyaadka argagaxisda ah.
Warbixino faahfaahsan ka dib golaha wasiiradu waxay u mahad-celiyeen hay’adaha amniga kuna dhiiri-geliyeen inay sii laba-laabaan horumarka ballaaran ee xasilinta amniga, waxayna si gaar ah ugu mahad-celiyeen shacabka Soomaaliyeed doorkooda xasillinta dalka oo muhiim u ahaa horumarka ballaaran ee laga sameeyay dhanka amniga.
Golaha wasiiradu waxay u mahad-celiyeen maamulka iyo shacabka Jubbaland, sidii hagar-la’aanta aheyd oo ay usoo dhaweeyeen kullankii isbuucii hore ee ka dhacay magaalada Kismaayo.
Sidoo kale, golahu waxay warbixin ka dhageysteen guddi heer wasiiro ah oo loo saaray hindise sharciyeedka jinsiyadaha, dood dheer kadibna waxaa la isla gartay muhiimada sharcigaan uu u leeyahay dalka gaar ahaan doorashooyinka. Sharcigaan ayaa dhowraya xaquuqda muwaadinka, midnimada, wadajirka iyo ka hortaga faquuqa, waxaana laga codsaday wasiirada inay waxii talo iyo fikir ah soo gudbiyaan sida ugu dhaqsiyada badan.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa hoosta ka xariiqay muhiimada soo dhameystirka hindise-sharciyeedyada muhiimka u ah dowlad wanaagga, iyadoo laga duulayo khudbadii madaxweynaha, ra’iisul wasaarahu waxuu faray dhammaan wasiirada inay sida ugu dhaqsiyada badan u soo gudbiyaan hindise-sharciyeedyada si loogu gudbiyo baarlamaanka.
Wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ayaa ka warbixisey safar shaqo oo ay ku tagtey Roma iyo Geneva oo ay sheegtay in labada shirba ay muhiim u ahaayeen dalka Soomaaliya, waxayna wasaaradu waday wadatashi lagu diyaarinayay siyaasadda gargaarka oo si fiican u qabsoomay.
Sidoo kale, wasaaradu waxay soo bandhigtay waxqabadkii wasaaradda oo iyadoo kaashaneysa hay’adaha gargaarka lagu guuleystay in la xakameeyo in dalka macluul ka dilaacdo iyo ka hortag laga sameeyay faafka cudurada dilaaga ah, welina waxaa la wadaa dadaal weyn.
Wasiirka gaadiidka ayaa golaha wasiirada ku wargeliyey in qiimeyntii ay dowlada Kenya ka sameeysay nidaamka garoonka diyaaradaha ee Aaden Cadde inay soo gudbiyeen in garoonka uu u dhamestiran yahay dhammaan shuruudihii Airport caalami ah laga rabey.
Sidoo kale, hay’adda duullista iyo saadaasha hawada ayaa ku guuleysatay in qalabkii lagu hagaayay diyaaradaha la keenay oo lagu rakibay xarunta hay’adda ay ku leedahay garoonka diyaaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.